Wasiir Dubbe oo lagu wado inuu Warbaahinta la hadlo – AfmoNews
Wasiir Dubbe oo lagu wado inuu Warbaahinta la hadlo
Cismaan Abokar Dubbe, Wasiirka Warfaafinta Somaliya ayaa waxaa lagu wadaa inuu faah faahiyo kulamadii ugu dambeeyay ee shirka Magaalada Dhuusamareeb.
Agaasimaha Warfaafinta ee Madaxtooyada Somaliya, Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa sheegay in wax badan laga sheegay shirka Magaalada Dhuusamareeb, xaqiiqooyinka la xiriirana uu dadka la wadaagi doono Wasiirka Warfaafinta.
Agaasimaha ayaa qoraal uu ku daabacay bartiisa xiriirka dadweynaha waxaa uu ku sheegay in Wasiir Dubbe uu Warbaahinta uga xog warami doono halka ay wax marayaan.
“Wax badan ayaa laga sheegay wadahadalada ka socda Magaalada Samareeb. Si kastaba ha-ahaatee waxaan dhawaan ka maqli doonnaa xaqiiqooyinka ku saabsan macluumaadka shirka, Wasiirka Warfaafinta, Cismaan Abokar Dubbe. Wasiirka ayaa la hadli doono Warbaahinta, wuxuuna dadkeena la socodsiin doonnaa kulamadii ugu dambeeyay oo Jimcihiina ay ku jirto.” Ayuu yiri Agaasimaha.
Shirka Dhuusamareeb ayaa waxaa tan iyo Arbacadii looga hadlaya saddexda qodob ee kala ah cidda soo xuleysa Xildhibaanada Gobolada Waqooyi, arrinta Gobolka Gedo iyo diidmada horaan laga muujiyay Xubnaha Guddiga Doorashooyinka qaarkood, oo Golaha Midowga Musharaxiinta dalbadeen in la bedelo.
Nigeria: Waxaa lasii daayay gabdho todobaadkii hore laga afduubtay iskuul ay dhiganayeen – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Mucaaradka oo Farmaajo ku eedeeyay inuu ‘carqaladeynayo’ wadahadalada iyaga iyo Rooble – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Beesha Caalamka oo baaq cusub ka soo saartay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
WARKA DUHUR (02-03-2021) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Barnaamijka Ciyaaraha (02-03-2021) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Barnaamijka Ogaal (02-03-2021) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia